Niala tany amin’i Lantonirina Manjakazafy, izay tsy tafiditra ny tsipiky ny fahatongavana raha tsy tany amin’ny laharana fahefatra, ny akanjoba mavo rehefa nosalorany tao anaty andro vitsivitsy. I Alexis Tourtelot, izay mpiara-mihazakazaka amin’i Médérick Clain amin’ny ekipan’ny Castle Events, no nisalotra izany indray nanomboka omaly ary mihevitra ny hitana izany hatramin’ny farany.
Io no fandresena faharoa tamin’ireo dingana vitan’i Alexis Tourtelot, taorian’ny efa nitarihany ny dingana tao Ihosy. Vao tany amin’ny 10 km dia efa niezaka ny niala tamin’ny « peloton » izy, izay nifanakaikezany tamin-dry Médéric Clain sy Bruno Randrianarimanana ary Emile Randrianantenaina.
« Manomboka tsara ny fifaninanana. Tanjonay i Alexis Tourtelot sy Médéric Clain, teo am-pahatongavana tamin’ity androany ity ny handromhaka izany, na iza na iza eo amin’ny ekipa misy anay ary tratra izany », hoy i Alexis Tourtelot, tompon’ny dingana fahadimy tao Ambositra. Anio dia hiala sasatra kely ao Morondava ireo mpihazakazaka mialoha ny hanohizana indray ny lalana mankaty Antananarivo. Rahampitso dia ny fihodinana ny tanànan’i Morondava no hotontosaina, izay hirefy 90 km. Ilaina ny mpihazakazaka manana hafainganam-pandeha amin’izany.